Mo Farah oo markale u awood sheegtay ciyaaryahanadii dunida ugu fiicnaa
Mo Farah oo markale u awood sheegtay ciyaaryahanadii dunida ugu fiicnaa	Last Updated on Sunday, 12 August 2012 16:38	Written by Mogadishu Times	Sunday, 12 August 2012 16:18	Mo Farah ayaa mar kale ku guuleystay bilad dahab ah. Wuxuu ku guuleystay orodka 5000 oo meter. Wuxuu hore ugu guuleystay 1000 oo meter.
Wuxuu noqday ciyaar yahankii ugu horeeyay taariikhda ee Ingiriiska orodada u matala oo ku guuleysta labo biladood oo dahab ah. Wuxuu kaloo noqday ciyaar yahankii ugu horeeyay ee ku dhasha Soomaaliya oo bilad dahab ah ka qaata ciyaaraha Olympic-kada.
Wuxuu shalay u awood sheegtay ciyaar yahanadii ugu dhiicnaa dunida ee orda orodka 5000 ee meter. Garoonka waxaa fadhiyay 80 kun oo qof oo dhamaantood u wada qeylinayay una taagnaa halyeyga Mo Farah. Waxaa garoonka fadhiyay oo dhinacooda ka qeylinayay dad caan ah oo uu ka mid ahaa David Beckham iyo qaar ka mid ah boqortooyada Ingiriiska.
Waxaa maanta lagu wadaa in uu la kulmo Ra’iisal Wasaaraha Ingiriiska David Cameron. Waxay ka wada hadli doonaan barnaamij lagu caawinayo Africa. Usain Bolt